Soomaaliya oo ka qeybgeleysa shirka Afrika iyo Hindiya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
5th March 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Buri’ Mohamed Hamza ayaa waxa uu maanta ka ambabaxay Caasimadda Muqdisho, isaga oo ku sii jeeda Caasimadda India ee New Delhi , halkaas oo uu kaga qeybgalayo Shir ay iskugu imaanayaan wadamada Africa iyo India oo Wasiiro iyo mas’uuliyiin sare lagu marti qaaday.
Shirkani oo ah kii tobanaad oo noociisa ah, ayaa waxa uu socon doonaa maalmaha 9-11 March, waxaana Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Buri’ Mohamed Hamza uu halkaasi ku muujin doonaa ifafaalaha nabadeed iyo barwaaqo ee Soomaaliya ay hiigsaneyso iyo kaalinta beesha caalamka ee maalgeshiga iyo dib u dhiska dalka.
Shirkani oo ka furmi doona Taj Palace ee Magaalada New Delhi ayaa waxaa lagu soo bandhigi doonaa istiraatiijiyad cusub oo la xiriirta Xiriirka India iyo Africa, waxaana dowladda India ay dadaal balaaran ugu jirtaa heshiisyo isfaham iyo mashaariic oo ay la gasho wadamada Africa si wax soo saarka dalkeeda ay ugu iib geyso.
Dhanka kale, wasiir kuxigeenka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Mahad Mohamed Saladayaa maanta ku qaabilay Xafiiskiisa Wafdi uu hogaaminayo Danjiraha Switzerland u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Dominik Langenbacher oo ay ka wada hadleen Xoojinta Xiriirka labada dal , taageerida hey’adda dowladda Federaalka iyo caawinta maamulada gobolada kala duwan ee dalka Soomaaliya.
Wasiir kuxigeenka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Mahad Mohamed Salad oo kulanka ka hadlay ayaa kaga mahad celiyay dowladda Switzerland talooyinka wax ku oolka ah iyo taageerada ay u fidineyso dowladda Federaalka Soomaaliya.
Dhanka kale, Wasiirka Maaliyadda Hussein Abdi Halane ayaa ku qaabilay xafiiskiisa Ambassador Dominik Langenbacher, iyadoo kulankaasi uu ku dhamaaday jawi is faham leh , waxaana la qorsheynayaa in Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Federaalka H.E. Abdullahi Godah Barre iyo Wasiirka Amniga qaranka H.E. Abdikarim Hussein Guled inay xafiisyadooda si gaar gaar ah ay ugu qaabilsaan Danjirahaasi dowladda Switzerland u qaabilsan Soomaaliya .